ABAFAZI BAQHUBA NJANI IIDUNGEONS KUNYE NEDRAGONS RENAISSANCE - NGAPHANTSI KWEZISELE IIDRAGONI
Abafazi baqhuba njani iiDungeons kunye neDragons Renaissance
Ngaphezulu kweminyaka engama-40 ubukho bayo, i-2017 yayi Izisele kunye neeDragons ' owona nyaka mkhulu kunabo bonke, hayi ngomda omncinci. Abantu abayi-12-15 yezigidi badlale I-D & D eMntla Melika ngo-2017. Inkampani esemva komdlalo, iiWizards zoNxweme, yabona ukukhula kwintengiso eyayimalunga ne-40% ngaphezulu kwenani labo ukusukela kunyaka ongaphambi kwalowo, kwaye ngelixa kusekutsha, yonke imiqondiso yalatha ku-2018 ukuba nkulu ngakumbi.
Impumelelo yequbuliso yomdlalo ayisiyo ncam imfihlakalo, kwaye ayisiyiyo ngesiquphe. Utshintsho luqale ngo-2014, ngokukhutshwa komdlalo wesihlanu wohlobo lomdlalo. Ukuba u I-D & D fan, mhlawumbi sele uyazi ukuba loluphi utshintsho olubalulekileyo. Kwinto engaqhelekanga-ngaphandle kokukufaka iinkcukacha-upapasho lwesi-5 lutshintshe ugqaliselo lomdlalo ukuze lujolise kakhulu kumba wokubalisa amabali. Ubuncinci bezinto zokulwa, ukucaciswa kwemigca emincinci kunye neemephu kwakungasadingeki kumdlalo wokudlala. Endaweni yokuba, umdlalo wamkele ukuziva okuvulekileyo, apho kulawula khona ibali. Emva kwayo yonke loo nto, impumelelo enkulu yomdlalo engapheliyo ibangelwa luthando lomntu lokuzalwa kwamabali. Ushicilelo lwesihlanu lwaluvumela ukuba luphumelele.
Ekuxoxeni ngokuthandwa komdlalo, abantu abaninzi endibathethile ngexesha lotyelelo kwiiWebhu zoNxweme baqaphele ukubaluleka kohlobo lokunxibelelana ubuso ngobuso umdlalo ovumelekileyo, uhlobo oluya lunqabile kakhulu kwixesha losasazo lwentlalo. Ukanti indima ye-intanethi koku I-D & D I-boom ayinakugqithiswa. Ngelixa izizukulwana zangaphambili zifumene indlela yazo kumdlalo ngokusebenzisa izihlobo kunye namalungu osapho, ii-newbies zangoku ikakhulu zaziswa kumdlalo okwi-intanethi. Kunyaka ophelileyo, iiyure ezili-10 zeeyure I-D & D zahanjiswa kwiTwitch, kwaye kuphela malunga ne-500,000 yazo yaveliswa ngooWizard boNxweme. Ezinye zezo yure zivela kubantu abadumileyo, abadumileyo Nyanzela Grey okanye Indima ebalulekileyo , kodwa uninzi lwayo ngabadlali abaqhelekileyo ababelana ngamava abo.
Abantu badlala itoni I-D & D , kodwa bakwabukela njengolonwabo njengokubukela imovie okanye imidlalo. Kunzima ukucinga ukuba bekuya kuba njalo ngaphandle koshicilelo lwe-5 lokutshintsha kugxile.
Njengokuba umyili wemithetho ekhokelayo uJeremy Crawford eyicacisa, Yinto elula ngokwenene, kodwa nge-5, eso sigqibo sokungafuni miniature sasisikhulu. Ukwenza kwethu ngesiquphe kuvule wonke umntu kwitafile yegumbi lokutyela kwaye, ngeendlela ezininzi, kwenze ukuba kube nokwenzeka ukusasaza okusasazelayo esikubonayo ngoku.
Inxalenye yoko inokwenzeka kuba ngoku ungadlala I-D & D kwaye ujonge ubuso babantu, utsho. Ngabantu abajongileyo, behleka kunye, bebalisa kunye, kwaye yile nto kanye besizabalazela yona.
Kwaye loo nto iguqulela kwindlela ababukeli abakonwabela ngayo ukubukela abanye bedlala. Loluphi uhlobo lwesihlanu olwenze okona kulungileyo, ngokokuyilwa komdlalo uKate Welch, yile ngcamango yokuba yindawo yemidlalo yengqondo kunye nokucinga, kunye nokubeka ugxininiso kwibali nakwilizwe elenziwa ngabadlali. Olu luhlobo lomdlalo abantu abafuna ukuwubona, kokubini kwiziyunguma zabo nakwizikrini zabo.
Baninzi abantu abadlalayo I-D & D kunanini na ngaphambili, kodwa ke zininzi iintlobo zabantu. Abafazi ngoku benza kufutshane ne-40% ye I-D & D ekuhlaleni. Ngelixa injongo isekhona lelo nani ukubonakalisa ngokupheleleyo ububanzi babemi, kukutsiba okukhulu ukusuka ku-2012, xa abasetyhini benza i-20-25% yabadlali.
ubuhle kunye neetropi zerhamncwa
Isizathu esikhulu sokutsiba kwabadlali ababhinqileyo sibuyele ekuthandeni ukusasaza, kunye nokubonakala kwamanye amabhinqa adlalayo. Abasetyhini banobukho obukhulu kwi I-D & D Ukusasazwa kwi-Intanethi, kwaye iqela elikwiWebhu yoNxweme alithandabuzi ukuba ukumelwa okubonelelayo kube nefuthe kwabasetyhini abaziva bezithembile xa bengena kwivenkile yomdlalo wabo.
Ndiyacinga ukuba loluphi ulwalamano lwam naye I-D & D Ingabonakala ngathi namhlanje ukuba ndikhule ngeTwitch kunye neYouTube, kwaye ndabona olu hlobo lokumelwa lubonakaliswa. Ndikhule ndingqongwe ngabantu I-D & D , kodwa ngendlela engaqhelekanga, kwakungekho ndide ndityelele iiWebhu zoNxweme apho ndadlala khona umdlalo wam wokuqala. (Ngoku ibeke ibha ngokungenakwenzeka kwimidlalo ezayo. Enkosi, iiWizard.)
Ukulinganisa u-stereotype, yayingamakhwenkwe am onke akhulayo ayedlala, kwaye ngelixa ndingazange ndicelwe ukuba ndidlale, ndicinga ukuba ndingamkeleka. Kodwa ndandisoyika kakhulu ukuba ndingaze ndibuze. Ndandisoyika ukungalungi kuyo-into engenakuphepheka xa ungazange wenze into ngaphambili, kodwa ndandisoyika kakhulu ukuba ndiyintombazana embi I-D & D , ke andizange ndibuze, kwaye ndaphoswa. Indawo yokudlala yahlukile ngoku, kunye nokukhetha ukubukela umdlalo, ukuziqhelanisa nawo, kunye nokubukela abanye bezonwabele, kukhulu kuye nabani na onomdla wokudlala, mhlawumbi ngakumbi abo banexhala, abazixhalabisayo, okanye abagqibeleleyo amantombazana nawo ayesaba ukucela ukujoyina.
Kodwa akufani nokuba olu hlobo lokubandakanywa luyinto I-D & D Iqela lakhubeka nje. Inkampani izinikele ekuqinisekiseni ukuba iqala ngaphakathi. Elo nani lamanani labasetyhini abenza malunga neepesenti ezingama-40 zabadlali liyafana nokwenziwa kweqela elisemva komdlalo. Abafazi bahlala kuyo yonke indawo ngasemva I-D & D , Ukusuka kumagcisa kuyilo, kwaye ibonisa kumdlalo.
Kuhlelo lwamva nje lwencwadi yoMdlali's Handbook, akukho zibonelelo okanye zithintelo ekudlalweni njengesini esithile. (Abalinganiswa abangamadoda, umzekelo, abomelelanga ngokwemvelo kunabasetyhini.) Abadlali abavumelekanga nje, kodwa bayakhuthazwa, ukuba-kumagama wencwadi-bacinge ngendlela umlinganiswa wakho enza ngayo okanye angahambelaniyo kulindelo lwenkcubeko ngokubanzi ngesondo , isini, kunye nokuziphatha ngokwesondo, kunye nokuphonononga ngaphaya kweengcinga zesini kunye nesini xa usenza isimilo sabo.
UMlawuli oMkhulu uNathan Stewart uthi la magama ayizongezo zintsha kumdlalo. Sinyule nje, kuHlelo lwesi-5, ukuba sibeke inqaku kuyo kwaye siyizise kwicandelo apho udala umlinganiswa wakho. Into esasifuna ukuyenza yayikukuqinisekisa nje ukuba zonke ezi zimvo zokwamkela nokwamkela zazingekho nje kwiingcinga zethu kuphela, kodwa zabhalwa phantsi.
Ukongeza kulombhalo, umsebenzi wobugcisa unika kwangoko, isibonakaliso esicacileyo sentlonipho eli qela elinayo kubalinganiswa nakubadlali bayo. Zimnkile iintsuku zokuziphatha ngokwesini kunye nokuchasana nabalinganiswa ababhinqileyo I-D & D ubugcisa. UKate Irwin, D&D ’ Umlawuli wezoBugcisa oPhezulu, ungene ngexesha lohlelo lwesi-4, kwaye uthi ukumelwa kwabafazi kwakuyeyona nto kugxilwe kuyo. Yayiyinto esasiyazi kakuhle, kwaye sasizama ukutshintsha icala lomkhombe. Uthi ngohlelo lwesihlanu, sikwazile ukwenza ukuma kwaye sicace gca ngale ngxelo.
I-jared leto yi-esile
Ukuthetha malunga nokubonakaliswa okwenyani kwabalinganiswa ababhinqileyo kumdlalo wobugqi kunokubonakala kungaqhelekanga okanye kungafuneki, kodwa u-Irwin uthi, xa kuziwa kweli hlabathi kunye neenkcukacha ezikulo, Ngumlingo, kodwa kuyasebenza, okuthetha ukuba kufuneka baphonononge okuninzi esele ikho tropes kwaye bazibuze izinto ezinje, ngaba i-wizard inganxiba iimpahla ezinde kakhulu ezihamba ngomgxobhozo? Ngaba ayizukubathintela njengoko besenza izinto? Oko kuyasebenza kuhlobo lwee-bikinis zoboya ezinde ezinxulunyaniswa nabalinganiswa ababhinqileyo. Ezo zambatho zivelisayo (kunye neendawo ezivuselelayo) ayizizo nje ezingenakwenzeka, kodwa ubukhulu becala zazibekwa kubadlali ababhinqileyo abakhoyo nabakhoyo.
UTaylor Hatala kunye noKyndall Harris
UMlawuli oMkhulu woBugcisa boBugcisa uShauna Narciso uthi lixesha lokuba zitshintshe. Lixesha lokuba akukaze kube lixesha ngaphambili lokuba nendawo leyo. Kwaye singayenza ngaphakathi I-D & D kuba yinto elungileyo ukuyenza. Kuyinto kuphela kwento yokwenza.
Ukujongwa ngelensi yethu yangoku, kubonakala ngathi akukho ngqiqweni ukugcina abadlali behlukanisa ezo ndlela-iindlela zeebhikini zoboya. Abantu bayazi ngakumbi ngoku, u-Irwin uthi. Kwixesha elidlulileyo, usenokungakuqapheli ngokwenene, kodwa kusenokwenzeka, ngandlela thile, ukuba kungene ngobuqili kwi-psyche yakho, kodwa abantu khange bathethe nyani ngayo. Kwaye okukhona sithetha ngayo, kokukhona siya siba malunga nayo, kwaye siyayiqaphela kwiindawo ezininzi.
UNarcisco wongeza, ndihlala ndimangalisiwe xa ndijonga emva kwinto esakhula ngayo kwaye sizivumela njani izinto zityibilike kwaye zityibilike ngendlela ezenze ngayo, xa ngoku kunyanzelekile kwaye kucacile ukuba kubuhlungu ukuba olo khetho kufuneka lwenziwe, kwaye re kwindawo elungileyo yokwenza.
Ke yile nto bayenzayo. Kunjalo, D&D ’ Abadali abanakho ukulawula okwenziwa ngabadlali ngomdlalo, okanye indlela abahlonipha ngayo kwaba balinganiswa okanye kwabanye abadlali. Benza konke abanako, kokubini kumdlalo nakuluntu, ukuvala ukugcinwa kwesango xa bekubona kwi-Intanethi. Kodwa, ekupheleni kosuku, uStewart uthi, sinesikhokhelo nje esinika sona ngokubandakanya kunye nokwenza wonke umntu azive amkelekile.
(imifanekiso: D & D / iiWebhu zoNxweme)
Iqhawe Lasemelika Ninja
su iigram zekristale ezintsha
Igridi yolungelelwaniso d & d
supergirl schott ngentliziyo
molo uthixo ndim margaret deadpool
iklabhu yethu yokusingathwa kwesikolo samabanga aphakamileyo manga fox